Osimiri Aruba: Ugo Osimiri, ezigbo paradaịs | Akụkọ Njem
Ugo Osimiri, oke osimiri dị na Aruba
Mariela Carril | | America, Islands
Na pere mpe Antilles bụ mara mma Caribbean agwaetiti nke Aruba. Izu ike n'ebe ndịda Caribbean na bụ nke Netherlands ruo ọtụtụ narị afọ ọ bụ ezie na ndị Europe mbụ malitere ịchị ya bụ ndị Spen.
Aruba bụ agwaetiti dị n'akụkụ nke ụwa a: ahịhịa ndụ na-ekpo ọkụ, ụsọ mmiri aja ọcha, mmiri doro anya na nnukwu ụlọ nkwari akụ nke mere ka akụkụ a nke otu n'ime ezumike ezumike maka ọtụtụ ndị njem na Europe. Na O nwere osimiri ebe a na-anabata ụfọdụ nudism, ihe na-abaghị ụba n'ụsọ osimiri Caribbean.
2 Usọ osimiri ndị Aruba
3 Ugo Osimiri
Aruba ọ bụ agwaetiti na-enweghị nnukwu enyemaka, nanị ugwu ole na ole n'ime ime nke na-adịghị eru 200 mita nke elu. O nweghị osimiri na ihu igwe ya anaghị agbanwe ọtụtụ afọ n’afọ. Ọ na-ekpo ọkụ. Isi obodo a bu obodo Oranjestad, nke di ihe di ka kilomita iri-na ise n’ise n’ugwu nke Venezuela.
Aruba Na-ebi site na njem na imirikiti ndị ọbịa ya si na United States buru ụzọ wee si Europe. Ngalaba ahụ malitere itolite na 90s ma nke ahụ enyerela aka mee ka enweghị ọrụ belata.
Ndị Aruba bi gburugburu 100 bi, dịtụ karịa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara biri n'isi obodo ahụ. Ọtụtụ sitere na ndị ọbịa bi na Spanish na Dutch ndị bịarutere mgbe narị afọ nke ọnụnọ Hispanic gasịrị. Ha na-esite na ndị ohu ojii na obere ndị sitere na ndị mbụ, Arawak. Taa ndị mmadụ si n'akụkụ ọzọ nke ụwa na-abịa ibi ma na-arụ ọrụ.
Ebe gị na ọtụtụ ndị dị iche iche nọ, olee asụsụ ị na-asụ? Na-ekwu na - Dutch, Ọ bụ nke a na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ na ọ bụ otu n'ime asụsụ ndị gọọmentị mana ọ bụghị asụsụ a kacha asụ ka a na-eji asụsụ ndị ọzọ eme ihe kwa ụbọchị. Na nna ukwu ọ bụ ihe a na-ahụkarị ma nwekwa ọnọdụ nke asụsụ gọọmentị. Ọ bụ ngwakọta nke Afro-Portuguese na Spanish na ihe ị ga-anụ kacha.
Usọ osimiri ndị Aruba
Ọ bụrụ na anyị hụ map nke agwaetiti ahụ, anyị nwere ike ịdọrọ eriri ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ etiti ya wee kee ya ụzọ abụọ, otu ọdịda anyanwụ na otu ọwụwa anyanwụ. N'ebe ọdịda anyanwụ, osimiri iri dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ ya, mana n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nwere naanị anọ. Ekwesịrị ikwu ya Enweghi oke osimiri gba ọtọ na Aruba na enweghị osimiri ga-topless. Somefọdụ osimiri ọbụna nwere ihe ịrịba ama ndị na-echetara gị ma ọ bụrụ na ndị njem nleta echefuru apụta.
Mana omenaala siri ike karịa iwu ya na ebe a enwere ụsọ osimiri ma ọ bụ mpaghara ụfọdụ ụsọ mmiri dị “izu ike” ruo oge ụfọdụ ugbu a. Ma dị ka ọtụtụ ndị njem nleta na Europe na-abịarute, omenala na-agbasawanye ma ụkpụrụ na-agbada.
N'elu ụsọ mmiri Manchebo na Bucuti, n'akụkụ ọwụwa anyanwụ, ị ga-ahụ ụmụ nwanyị na-eme elu na otu na Divi na Tam, mana ọ bụrụ na enwere ebe ejiri nlezianya kpebie imebi iwu, ebe ahụ bụ ugo osimiri.
Osimiri Eagle bụ otu n’ime osimiri mara mma mara mma na Aruba na otu n’ime widest na widest. Nwere aja ọcha dị nro, dị ka ntụ ọka e gwere nke ọma, na nke na-adịchaghị ọcha, nke na-enye ume ọhụrụ, na-egosi mmiri dị omimi. Ọ bụ osimiri a haziri ahazi e nwere kiosks, picnic ebe, ụfọdụ mesịa na ulo na posts na-enye omume nke egwuregwu egwuregwu: jet-ski, ụgbọ mmiri, paragliding, ski ski, wdg.
Ikekwe osimiri mara nke ọma maka mbe, nduru abata n’akwụ ha mgbe anyanwụ dara na e nwere ụdị anọ dị iche iche: ndị nwere ogologo ogologo, ha na-eji akpụkpọ anụ sie ike, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na hawksbill. A na-enye ha ikike ịmị ebe ọ bụla n'àgwàetiti ahụ ka gọọmentị na-elekọta naanị ichekwa akwụ́ ebe ọ bụ na onye ọ bụla nwere ike nwee àkwá 80. A na-etinye akara uhie na odo maka nke ahụ.
Ugo Osimiri nwere ọtụtụ ụlọ nkwari akụ gafee okporo ámá, gafee okporo ámá, na ọtụtụ ndị na-enye ndị ọbịa ha ụlọ ezumike na nche anwụ. Otú ọ dị, akwụkwọ ozi kacha ochie bụ nke osisi e ji mara ya: fofoti. The fofoti dabere n'akụkụ Oke Osimiri Caribbean, ọ dị naanị abụọ, ọ ga-afọ nke nta ka m kwuo na ha pụtara na kaadi ifiranṣẹ niile nke agwaetiti ahụ.
N'agbanyeghị ụlọ nkwari akụ ndị a niile na otu esi aga njem osimiri a, eziokwu bụ na machibido topless ọtụtụ na-ewerekwa na ọ na-akwalite ya. Ọ na-agakarị ehihie karịa n'ụtụtụ, ee. Ọzọkwa, ị kwesịrị ịma nke ahụ a na-ahapụ ya ma ọ bụ na-anabata ya na mpaghara ụlọ nkwari akụ karịa ebe a na-ahụkarị Ọzọkwa naanị n'ụsọ osimiri, ọ bụghị n'ubi ma ọ bụ ụlọ ọrụ nkwari akụ.
Ugo Osimiri Ọ bụ ụsọ osimiri dị nso na isi obodo, OranjestadYabụ na ọ bụ otu n’ime ọdụ ụgbọ mmiri na-ekwo ekwo na Aruba. Ihe dị mma bụ na n'agbanyeghị na ọ nọ nso isi obodo nwere otutu otele ndi na adighi onu na ọtụtụ mita nke osimiri ya bụ maka ọha na eze ma ejidebeghị ya site na ntụrụndụ.
Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị na-amasị nudism mgbe ahụ i kwesịrị ịga ebe ọzọ na Aruba. Na De Palm Island na ebe ezumike Renaissance dị mma maka elu ugwu Nke ahụ bụ n'ihi na o nweelarị ngalaba okenye nke na-enye gị ohere ịgafe oke na ịbanye n'ime mmiri ọkara agba ọtọ. N'ezie, ị ga-abụ ọbịa ma ọ bụ kwụọ ụgwọ iji agwaetiti ahụ dịka onye ọbịa. Mgbe ahụ agwaetiti ahụ ghere oghe site na 7 nke ụtụtụ ruo elekere asaa nke ụtụtụ.
Yabụ ihe ị kwesịrị ịma bụ na Aruba enweghị osimiri gba ọtọ. Ihe o nwere bu ufodu osimiri ebe enwere ike ịga topless. Osimiri nile nke Aruba bụ nke ọha mana enwere ụfọdụ ngalaba ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ na nke ahụ bụ ebe ụkpụrụ ahụ dị. N'ezie, ọ bụrụ na ị pụọ n'obodo ndị ị gara, ọ bụrụhaala na ị nọ naanị gị, ịnwere ike ịnwa ịwepụtakwu uwe ịsa ahụ ma buru n'uche na iwu megidere gị.
N'ihi na ịgba ọtọ osimiri na Caribbean otu nhọrọ bụ Jamaica.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Islands » Ugo Osimiri, oke osimiri dị na Aruba
Uhie Brown dijo
Aruba tinyere Bonaire na Curaçao mejuputara Netherlands Antilles na enweghị Venezuela
Zaghachi Ardull Castaño
Egwuregwu Egwu nke Panama
Cala Fonda, osimiri osimiri Hawaii na Tarragona